2011-06-19 ~ Myanmar Express
အမေရိကန်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဖွား အမေရိကန်အစိုးရဝန်ထမ်းတွေ
မြန်မာအတိုက်အခံတွေ အားကျတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံက ဒီမိုကရေစီနည်းဖြင့် ပြည်သူများက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ သမ္မတကြီး စီးတဲ့ကား(မြန်မာသမ္မတတောင် ကျည်မကာတဲ့ ကားနဲ့ အပြင်ထွက်ရဲတယ်)မြန်မာအတိုက်အခံတွေ အားကျတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံက သမ္မတကြီးက မိန့်ခွန်းတောင် လွတ်လွတ်လပ်လပ်မပြောရဲ(မြန်မာသမ္မတကမှ ပြောရဲသေးတယ်)ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာ အမှန်တရားတွေပြောလို့ ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့ ဝီကီလိခ်မြန်မာအတိုက်အခံတွေ အားကျတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံက ရာထူးကပြုတ်ရင် လမ်းဘေးပို့ခံရတဲ့ ဖိနပ်စာမိဖူးတဲ့ လဒမှိုင်မှိုင် နေတဲ့ ဘုခ်ျရှေ့က ထမင်းထုပ်ကို မဲနေကြတာ နောက်က ဝရင်းဒုတ်ကို မတွေ့ကြဘူး(ဘင်လာဒင်က နောက်မှာ)စစ်ဖြစ်ရင် ဘယ်သူတွေစစ်ဒဏ်ခံရလဲ။သမ္မတက ခံရလား၊ စစ်တပ်နဲ့ ပြည်သူက ခံရလားတစ်ဖက်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အပစ်မဲ့ပြည်သူတွေ သေအောင် စစ်တွေတိုက်နေပြီး တစ်ဖက်မှာ ပျော်ပါးနေကြမြန်မာနိုင်ငံဖွား အမေရိကန်အစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတဲ့လူများက အမေရိကန်ကပေးတဲ့ ပေးစာကမ်းစာတွေစားပြီး ကမ္ဘာအလည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံမကောင်းကြောင်း နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ပြောနေကြ၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကို ဖျက်ဆီးကြ(နွားညွန့်ဦး၏ ကုတ်အင်္ကျီနဲ့ ခေါင်းပေါင်း ဖက်ရှင်)
နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ကိုယ့်နိုင်ငံအကြောင်း မကောင်းထိုင်ပြောပြီး ပေးတာယူ ကျွေးတာစားကာ ပျော်ပါးနေကြသော အမေရိကန် အစိုးရဝန်ထမ်း ဆိုသူများ Myanmar Express
သိန်းကျော်တန်တဲံ့အပျိုစင်ဘ၀ကိုချိုချဉ်နှစ်လုံးနဲ့မလဲချင်ပါနဲ့ (ပေးစာ - ၁၉)
အချစ်မှာမျက်စိမရှိဘူးလို့ဆိုရိုးစကားလေးတွေရှိခဲ့တာကိုမယုံမိဘူး......ဒါပေမဲ့အခုတော့ယုံရမလိုဖြစ်နေပြီ.....သူ့နာမည်က..လေပြည်သွေးစက်ာပူမှာအလုပ်လုပ်နေတာလေ....တစ်နေ့တော့အွန်လိုင်းပေါ်မှာကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တာပေါ့...သူ့နာမည်က....မျိုးမင်းသိန်းတဲံ့သူကတော့မလေးရှာမှာအလုပ်လုပ်နေတာပါ..အစကတော့သူငယ်ချင်းတွေပေါ့...တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြာလာတော့ရည်းစားတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လေပြည်သွေးကပညာတက်လေးပါဘွဲ့တွေလဲနှစ်ခုလောက်ယူထားတာ...လစာငွေလဲကောင်းတယ်လေစလုံးမှာဆိုတော့.........တစ်နေ့မှာတော့“လေပြည်ကိုမျိုးနဲ့လာနေပါလားကိုမျိုတို့လေပြည်ကိုမခွဲနိုင်ဘူးအတူတူနေရအောင်လေ”“အင်းပါကိုမျိုးရယ်လေပြည်လဲကိုမျိုးနဲ့အတူနေချင်ပါတယ်ဘယ်လိုလာရမှာလဲကိုမျိုးပြောပြလေ”“လေပြည်ကလဲလွယ်လွယ်လေးပါမလေးကိုအလည်အပတ်နဲ့လာခဲ့လေပြီးတော့မပြန်တော့နဲ့ကိုမျိုးတစ်ယောက်လုံးရှိပါတယ်”“ဖြစ်ပါါ့မလားကိုမျိုးရယ်”ဖြစ်ပါတယ်လေပြည်ကကိုမျိုးကိုမယုံလို့လား”“မယုံလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုမျိုးရယ်”“လေပြည်ကကိုမျိုးကိုမယုံသလိုပဲ”မဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုလေပြည်လာခဲ့မယ်လေနော်ကိုမျိုးပြီးမှလေပြည့်ကိုထားမသွားနဲ့နော်လေပြည်လေကိုမျိုးထားသွားမှာကိုကြောက်တယ်”“ကိုကလေပြည်ကိုဘာလို့ထားခဲ့ရမှာလဲလေပြည်ကိုတစ်ကယ်ချစ်တာပါ”“ယုံပါတယ်ကိုမျိုးရယ်လေပြည်လာခဲ့မယ်နော်”“အင်း..ကိုမျိုးစောင့်နေမယ်နော်လေပြည်ရောက်ရင်ဖုန်းဆက်လိုက်နော်”“အင်းပါ”ဒီလိုနဲ့လေပြည်တစ်ယောက်စလုံးကနေမလေးကိုရောက်လာခဲ့တာပေါ့...ရောက်ခါစမှာတော်နှစ်ယောက်သားကြည်နူးရင်းနဲ့ပျော်ခဲ့ကြတာပေါ့(ဒီနေရာမှာတစ်ခုလောက်ပြောပါရစေတစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်မသိပဲနဲ့လက်မခံဖို့ပါ)ဒီလိုနဲံ့နည်းနည်းကြာလာတော့အဖြေအနေကတစ်မျိုးပြောင်းတော့တာပေါ့...ကိုခိုင်နင့်သူငယ်ချင်းကိုပြောပါအုံးဟာနေ့တိုင်းဂိမ်းပဲကစားနေတယ်တစ်ခါမှလဲမနိုင်ဘူး...ဖဲလေးကလဲစနေညဆိုရင်ဝိုင်းမှာရောက်နေပြီကြည့်ပြောပေးပါအုံးဟာ....အာအမကလဲသူဖဲကစားတာဂိမ်းထိုးတာအခုမ မှ မဟုတ်တာအစောကြီးကတည်းကကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရလို့ဘာမှမပြောတာ...မပြောချင်ပါဘူးအမရယ်အမပဲကြည့်ပြောကြည့်ပါလား“ငါလဲပြောတာပဲတစ်ရက်နှစ်ရက်လဲမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းလိုဖြစ်နေတာအဲံဒါကြောင့်ပါတစ်ခါတစ်လေဆိုငါမပြောပါဘူး”“အမကအစောကြီးထဲကမှမလေ့လာထားတာဒီလိုလုပ်တာအခုမ မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောသားပဲ”ဒီလိုနဲ့နေ့တိုင်းသူတို့အခန်းကတစ်ဂျက်ဂျက်နဲ့ရန်ဖြစ်နေကြတာပေါ့....“လေပြည်နင့်မှာပိုက်ဆံရှိရင်ပေးအုံးဟာငါဂိမ်းထို့ဖို့ဘိုင်ပြတ်နေလို့”“ပိုက်ဆံကမကျန်တော့ဘူး”“ဘာလဲနင်ကမပေးချင်လို့အကြောင်းပြတာဟုတ်လားပေးမှာလားမပေးဘူးလာဒါပဲပြော”“မရှိဘူးလို့ဘယ်နှစ်ခါပြောရမှာလဲရှင်ရတဲ့လစာလဲဘာမှပြန်မပေးဘူးဖဲနဲ့ဂိမ်းနဲ့ပဲပြီးနေတာလေရှင်ပေးထားတာရှိလို့လားမပေးနိုင်ဘူး”“ဟာ..ဒီမိန်းမငါလုပ်ရင်သေတော့မယ်”“လုပ်ရဲလုပ်ကြည့်ပါလား”ကဲဟာ..ဖြန်း..ဖြန်း ငါ့ကိုပြန်ပြောအုံး.....ကိုခိုင်ရယ်ငါတော့သေချင်တာပဲနေတိုင်းမတွေ့ချင်လဲတွေ့နေရတယ်တွေ့တိုင်လဲငါ့ကိုရန်ရှာတယ်စိတ်ညစ်ပါတယ်ဟာကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာတော့အမရယ်သူ့အကြောင်းမသိပဲနဲ့ဘာလို့ယူခဲ့တာလဲလို့မေးနေမိတယ်တကယ်ဆိုရင်အွန်လိုင်းမှတွေ့ယုံနဲ့ဒီလောက်ထိမယုံသင့်ဘူးမဟုတ်လား....(အားလုံးကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ)မိန်းမတို့က္ကိုနြေ္ဒရွှေပေးလို့မရဘူးတဲ့အခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာအဖြစ်မှန်တွေကိုသာကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်သူဘယ်လိုနေမလဲလို့ကျွန်တော့်စိတ်ထဲကပြောနေမိတယ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှကြားနေရပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့သူကအစကတည်းကမတည့်တာဆိုတော့မပြောချင်ဘူးလေဒီလိုနဲ့တစ်နေ့မှာတော့အော်ပရာစီ(လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး)တွေကျွန်တော်တို့နားကအားလုံးကိုဝင်ဖမ်းတာပေါ့အဲံ့ဒီအချိန်မှာလေပြည်ပါအဖမ်းခံရလိုက်ရတယ်သူ့စာအုပ်ကနေထိုင်ခွင့်မှမရှိတော့တာ...အခုမှသူနောင်တတွေကောင်းကောင်းကြီးရသွားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျသွားပြီလေ.....သူ့ကိုရဲတွေကလပ်ထိပ်ခတ်ပြီးဖမ်းသွားကြပြီလေ...သူမျက်ဝန်းမှာတော့.......နှောင်းနောင်တမျက်ရည်တွေနဲ့ပေါ့.....တကယ်တော့ကိုမျိုးကမြန်မာပြည်မှာမိန်းမနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်အဖေပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်သူ့မှာခံနိုင်ရည်ရှိပါ့မလားလို့ပေါ့....ခုတေ့ာလဲဒါတွေပြီးခဲ့ပါပြီသူလဲမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်သွားပြီလေ..ကောင်းပါတယ်အဲံလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့...ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မိန်းကလေးတို့ရဲ့သိန်းကျော်တန်တဲ့အပျိုစင်ဘ၀ကိုချိုချဉ်နှစ်လုံးနဲ့တော့တန်ဖိုးမဖြတ်ချင်ပါနဲ့လို့ပါ ဘယ်လောက်ပင်ချစ်စေကာမူသ့အကြောင်းကိုတော့စုံစမ်းသင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်လွယ်လွယ်နဲ့မယုံကြဖို့ယောကျာ်လေးကောမိန်ကလေးတွေပါသတိထားကြဖို့ပြောလိုက်ပါစေနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်................အောင်ခိုင်ဇော်.....0173639372..........`ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအမည်ပြောင်းပြီးတင်ပြလိုက်တာပါMyanmar Express
ABSDF ဥက္ကဌ ကြီး ရေးထားတဲ့ နာင်လာနောက်သားတို့ မှတ်သားရမည့် ဒဿန တစ်ခုပါ၈၈ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ခေါင်းတွေက ဘယ်လောက် စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်လဲ ဆိုတာကို သိနိုင်ပါတယ်ဒီလူတွေ၊ ဒီခေါင်းတွေ၊ ဒီအတွေး ဒီအရေးတွေနဲ့ အကောင်ထည်ဖော်နေလို့လည်း နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်နီးပါး ကြာသည်အထိ ဘာဆို ဘာမှ ဖြစ်မလာပါဘူးဒီလိုလူတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ ပြည်သူတွေဘဝ ကိုသာ ပုံအပ်လိုက်ရရင်တော့...................
အထက်အညာ အင်းတော်ကြီးဒေသ မာန်လည်မြို့ကလေးက လူငယ်တစ်ယောက် ဂျာနယ်တိုက်တွေကို စုံစမ်းမေးမြန်းပြီး ရောက်လာတယ်။ ချစ်စရာ မြန်မာ့ရိုးရာ ဓလေ့အတိုင်း ရောက်ရောက်ချင်း ဦးချကန်တော့ပြီးမှ သူ့ကိုယ်သူ မိတ်ဆက်တယ်။ နောက်တော့ သူ့ရင်ထဲမှာ မျိုသိပ်ထားရတာတွေ များလွန်းလို့ ဘယ်လိုမှ အောင့်အီး မနေနိုင်တော့လို့ လာပြီး ရင်ဖွင့်တာပါလို့ နတ်သံမနှောဘဲ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောလိုက်တယ်။ ရွှေရှာကျောက်တူးနေမကောင်းလို့ စာတောင်မရေးနိုင်တဲ့အချိန် ဖြစ်နေပေမယ့် သူ့ခမျာ ဒီလို ရင်ဖွင့်ဖို့ သက်သက် ဝေးလံခေါင်ဖျား ဒေသက တပင်တပန်း လာခဲ့ရရှာတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သက်သာသလို နေရင်း နားထောင်ပေးခဲ့တယ်။စကားပြောရင်သာ မောပြီး နားထောင်တာက မောမှမမောတာ။ သူပြောတာက သူတို့ဒေသ တစ်ဝိုက်က လယ်သမားတွေ လယ်မလုပ်တော့ဘဲ မြစ်ရိုးတစ်လျှောက် ရွှေရှာသူတွေက ရှာကြ၊ မှော်တွေထဲသွားပြီး ကျောက်တူးသူတွေက တူးကြ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် တစ်ချိန်ချိန်မှာ သူများနိုင်ငံက ဆန်ကို ၀ယ်စားရတဲ့ အဖြစ်မျိုး ရောက်သွားမှာ စိုးရိမ်နေရပါတယ်တဲ့။ ''ရွှေမရှိတာက ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ဆန်မရှိရင်တော့ ဒုက္ခ အကြီးအကျယ်ရောက်မှာ ခင်ဗျ' မျက်နှာစိမ်းတွေအနီးအနား ၀န်းကျင် ဒေသတွေက သာမက မန္တလေးလို နေရာက မျက်နှာစိမ်းတွေလည်း အများကြီး တွေ့မြင်ကြရတယ်တဲ့။ ခြံစောင့်ရရင် တော်ပါပြီ၊ သွားနေပြီး လုပ်စားကြပါ။ ထွက်သမျှ သီးနှံတွေ အကုန်ယူပါလို့ ပြောတာတောင် သွားနေချင်သူ မရှိတဲ့ နေရာတွေက ခြံမြေတွေကို သိန်းရာနဲ့ ထောင်နဲ့ချီ ပေးပြီး ၀ယ်တာကို မရောင်းချင်သူ ဘယ်သူရှိပါ့မလဲ။ ဒါသဘာဝပဲ။ အပြစ်တင်လို့လည်း မရဘူး။ မနေ့ကတောင် သန်လျင် သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းသွားရာ လမ်းဘေးဝဲယာရှိ လယ်ကွက်တွေကို အ၀ယ်လိုက်နေလို့ တစ်ဧကကို သိန်း ၂၀ လောက်နဲ့ ရောင်းနေကြတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ဂျာနယ် တစ်စောင်မှာ ဖတ်လိုက်ရသေးတယ်။ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရဟာ နိုင်ငံသား တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ထဲမှာ ထည့်သွင်းရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းပေးထားခြင်း ဖြစ်တယ် . . . ဇောကြီးလွန်းလို့နိုင်ငံ တည်ဆောက်စ ကာလမှာ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေ တည်ဆောက်ကြ၊ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတွေ လုပ်ဆောင်ကြ ဆိုတာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် တွေမို့ ဒီသတင်းမျိုးတွေဟာ သိပ်မဆန်းပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စည်းလွတ်ဝါးလွတ်တော့ မဖြစ်စေသင့်ဘူး။ ၁၉၅၀ ဦးပိုင်း ကာလက လွတ်မြောက်လာစ တရုတ်ပြည်မှာ တည်ဆောက်ရေးဇောတွေ ကြီးမားလွန်ကဲပြီး ကျေးလက်ဒေသက အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ သံရည်ကျိုဖိုတွေ ရှိရမယ်။ သံတိုသံစတွေ စုဆောင်းရှာဖွေပြီး သံရည်ကျိုလုပ်ငန်း လုပ်ရမယ်။ သံနဲ့သံမဏိ များများ ထုတ်လုပ်နိုင်မှ မြန်မြန် စက်မှုနိုင်ငံကြီး တည်ဆောက်နိုင်မယ် ဆိုတဲ့' မဟာခုန်ပျံကျော်လွှား' (Great Leap Forward) စီမံကိန်းကြီး ချမှတ် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာကြောင့် ကသောင်းကနင်း ဖြစ်မှုကြီး ကြောက်စရာကောင်းအောင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးတယ်။ သင်ခန်းစာယူသင့်တောက လယ်သမားတွေ လယ်မစိုက်နိုင်တော့ စပါး မထွက်တော့ဘဲ ကြီးမားတဲ့ အငတ်ဘေးကြီး ကြုံတွေ့ခဲ့ရလို့ ပေါ်လစီ အမှားကို အမြန် စွန့်ပစ်ပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို ပြန်ပြီး ဦးစားပေးခဲ့ကြရတယ်။ ဒီအဖြစ်ကိုကောင်းကောင်း သင်ခန်းစာ ယူသင့်တယ်။ စက်ရုံတွေ ဆောက်ပါ။ မြို့ပြတွေ တည်ဆောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် စိုက်ပျိုးနေတဲ့ လယ်ယာတွေ နေရာမှာတော့ မဆောက်သင့်ဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ မြေလွတ်မြေရိုင်းတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့ အိုင်တီလုပ်ငန်းက စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းထက် ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ မယူဆသင့်ဘူး။ ''ရွှေမရှိတာက ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ ဆန်မရှိရင်တော့ ဒုက္ခ အကြီးအကျယ်ရောက်မှာ ခင်ဗျ'' ဆိုတဲ့ မာန်လည်က လူငယ်ပြောတဲ့ စကားကို မျက်ကွယ် ပြုမထားသင့်ဘူး။ ကမ္ဘာမှာ နံပါတ်တစ်မြန်မာနိုင်ငံသားဟာ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်က စိုက်ပျိုးရေးနိုင်ငံ ဖြစ်တယ်။ နယ်ချဲ့ လက်အောက် ကျရောက်နေစဉ် ကာလကတောင် ကမ္ဘာမှာ ဆန်တင်ပို့ ရောင်းချတဲ့ နံပါတ်တစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသ နိုင်ငံတွေ အားလုံးလောက် နီးပါးဟာ အရွယ်အစား ပမာဏအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံထက် ကြီးမား ကျယ်ဝန်းကြတယ်။ မြေကွက်ဧရိယာ အများကြီး ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရေမြေ အနေအထားနဲ့ ရာသီဥတု အခြေအနေက မြန်မာနိုင်ငံလောက် သပ္ပာယ ဖြစ်ပြီး မျှတတာ မရှိတာကြောင့် ဘယ်နိုင်ငံမှ ကောင်းကောင်း မစိုက်ပျိုးနိုင်ကြဘူး။ စိုက်ပြီးမိုးခေါင်လို့ သရောကြီး ခိုင်းတာနဲ့ ရိတ်သိမ်းခါနီးမှ မြစ်ရေ ချောင်းရေတွေ လျှံတက်လာလို့ ရွာကိုစွန့်ပြီး ကိုယ်လွတ် ရုန်းပြေးရတာနဲ့ အင်မတန် ဒုက္ခ ကြီးမားရှာကြတယ်။ အားလုံးပြိုသွားမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အပူလွန်လို့ အအေးလွန်လို့ လူတွေ အမြောက်အမြား သေကြရတာမျိုး မရှိသလို မိုးခေါင်လွန်းလို့၊ ရေကြီးလွန်းလို့ ဒုက္ခ ရောက်ရတာမျိုးလည်း ကြီးကြီးမားမား၊ များများစားစား မကြုံဖူးပါဘူး။ နာဂစ်ကတော့ ခြွင်းချက်ပေါ့။ နောက် ပြီးတော့ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းလို့ ပြောတဲ့အခါမှာ တောင်သူလယ်သမားနဲ့ ကောက်စိုက်သမတွေကိုချည်း မြင်နေလို့ မဖြစ်ဘူး။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အမှီပြုပြီး ရပ်တည်နေကြရတဲ့ လူဦးရေဟာ နိုင်ငံ့လူဦးရေရဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းလောက် ရှိပါတယ်။ စိုက်ပျိုးရေး ယိုင်နဲ့သွားရင် ရန်ကုန် ဘုရင့်နောင်လို ကုန်စည်ဈေးကွက်ကြီး တစ်ခုလုံး ပြိုကျသွားမှာပါ။ တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ ရှိနေတဲ့ ဆန်စက်တွေနဲ့ ဆက်စပ် လုပ်ငန်းတွေ၊ လှေသမ္ဗန်နဲ့ သင်္ဘောတွေ၊ မော်တော်ကားတွေလည်း လုပ်စရာ မရှိတော့ဘဲ ဖြစ်ကုန်ကြမှာပါ။ မရှိမဖြစ် လိုအပ်ချက်အဲဒါကြောင့် မလွဲမသွေ လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့် စက်မှု တည်ဆောက်ရေးများ လုပ်တဲ့အခါမှာ စနစ်တကျ စီမံကိန်းချပြီး လုပ်ဖို့ အထူးလိုအပ်တယ်။ ဒါ့အပြင် မမေ့အပ်တဲ့ အချက်တစ်ခုက ဒီမိုကရေစီစနစ် ထူထောင်ရာမှာ တိုင်းသူပြည်သား အားလုံးရဲ့ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင် ဆောင်ရွက်မှု မရှိမဖြစ် လိုအပ်တယ် ဆိုတာ ဖြစ်တယ်။ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အားတက်သရော ပါဝင် ဆောင်ရွက်ဖို့ ဆိုရင် တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အစိုးရဟာ သူတို့အားလုံး အတွက် မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ဆောင်နေတယ်။ သူတို့ အကျိုးစီးပွားကို အမြဲတမ်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်လို့ သံသယ ကင်းကင်းနဲ့ လုံးဝ ယုံကြည် စိတ်ချမှု ရှိနေဖို့ လိုအပ်တယ်။ ကြိုးစားဆဲကာလအစိုးရ တစ်ရပ်ဟာ ပြည်သူအများကို လျစ်လျူရှုပြီး လူတစ်စု အဖွဲ့အတွက်သာ လုပ်ဆောင်နေတယ်။ လူတစ်စုတစ်ဖွဲ့ အကျိုးစီးပွားကိုသာ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နေတယ်လို့ ထင်မြင် ယူဆနေရင်တော့ ဘယ်တော့မှ စိတ်ပါလက်ပါ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်လာမှာ မဟုတ်တာ သေချာတယ်။ ဒီနေ့ လက်ရှိ အစိုးရသစ်ဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစားမှုကို အပြည့်အ၀ ရရှိဖို့ ကြိုးစားနေဆဲကာလ ဖြစ်တယ်။ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူတွေ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ထွက်လာပြီး တရား ဥပဒေကို မှန်မှန်ကန်ကန် တည့်တည့်မတ်မတ် လိုက်နာ အကောင်အထည် ဖော်ကြဖို့ ပြောကြားနေကြတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါအလွန်အရေးကြီးတဲ့ အချက် ဖြစ်တယ်။ တရားဥပဒေဟာ ပြည်သူတွေကို အမြဲတမ်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက်တယ်။ မျက်နှာ နှစ်ဖက် မရှိဘူး။ တရားဥပဒေရဲ့ အထက်မှာ ဘယ်သူမှ မရှိဘူးလို့ သူတို့ အမှန်တကယ် ယုံကြည်လာရင် ဘယ်လို အစိုးရမျိုး မဆို သူတို့ ထောက်ခံကြမှာ ဖြစ်တယ်။ လမ်းဘေးဈေးသည် ရှင်းတဲ့အခါဒီလို အခြေအနေမှာ အဆင့် အသီးသီးက တာဝန်ရှိ ၀န်ထမ်းများဟာ စက်ရုံအလုပ်ရုံ (အစိုးရဖြစ်ဖြစ်၊ ပုဂ္ဂလိက ဖြစ်ဖြစ်) ဆောက်ဖို့ လယ်ယာမြေများ သိမ်းယူတဲ့ အခါ၊ လမ်းဖောက် တံတားဆောက်ဖို့ လူနေအိမ်ခြေများသိမ်းယူတဲ့အခါ၊ ယုတ်စွအဆုံး ပလက်ဖောင်းပေါ်က လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ ရှင်းလင်းတဲ့အခါ ဖြစ်ဖြစ် ဥပဒေဟာ နှစ်မျိုး မရှိဘူး ဆိုတာကို ပြတ်ပြတ်သားသား ပြဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရဟာ နိုင်ငံသားတစ်ဦးချင်းစီရဲ့အကျိုးစီးပွားကို ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေထဲမှာ ထည့်သွင်းရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းပေးထားခြင်း ဖြစ်တယ်။ မအပ်စပ်ဘူးဥပဒေထဲမှာ ပါတယ် ဆိုရုံနဲ့လည်း မပြီးသေးဘူး။ တကယ် လက်တွေ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့ လိုတယ်။ ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ ဈေးမရောင်းရဘူး ဆိုရင် ဘယ်သူမှကို မရောင်းရတာမျိုး ဖြစ်သင့်တယ်။ ဒီမိုကရေစီ စနစ်အောက်မှာ ပြည်သူပြည်သား အားလုံး တန်းတူညီမျှ အခွင့်အရေး ရှိတယ်။ အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစား ဆိုတာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ နည်းနည်းလေးမှ မအပ်စပ်ပါဘူး။လူထုစိန်ဝင်း
Gmail တွေကို Hack ထားတယ်, Hack အုံးမယ် သတိထား ဆိုတဲ့ BHG ၊ စကားအမျိုးမျိုးပြောတဲ့ DVB နှင့် ကြာကူလီရိုက်လို့ လူမိတာကို မရှက်ဘူးဆိုတဲ့ စိုင်းသိန်းဝင်း
နည်းပညာအကြောင်း မဆွေးနွေးတဲ့ DVB ရဲ့ နည်းပညာ အစီစဉ်တစ်ခု ပြည်သူတို့၏ သဘောထားများကြယ် စင် လင်း သီဟတင်စိုး နဲ့ တွေ့ပေးလိုက်မယ်... သစ္စာဖောက်တို့ သွားရာလမ်း ကိုပို့ပေးချင်လို့Sunday at 10:18 · Like ·5peopleရဲ သူရ ကျွန်တော်ကပုဆိုးကျွတ်သွားပေးမယ့်...ကျွန်တော်မရှက်ပါဘူး...သူပြောတာနော်..Sunday at 10:19 · Like ·4peopleရဲ သူရ သူ့ past chat တွေပြန်ဖတ်ကြည့်...ငစိုင်းကခုမေးနေတဲ့သန်းဝင်းထွဋ်အတင်းတောင်တုပ်ထားသေးတာ...တတ်လဲတတ်နိုင်တဲ့ဒီမိုတွေ..Sunday at 10:21 · Like ·3peopleကြယ် စင် လင်း ရှက်မယ့်ပုံလဲ မပေါ်ပါဘူး... ယောက်ျားလေးတွေ အားလုံး ဘူးပါတယ်.... ဒါပေမယ့် သူများ မယားတော့ မဘူးချင်ပါဘူး....Sunday at 10:22 · Like ·4peopleရဲ သူရ အယ်သူကပြောတယ်လေ...ဒီလိုလုပ်ရပ်အတွက်ကျွန်တော်မရှက်ပါဘူးတဲ့...ရှက်ရမှာကတပ်မတော်ကအရာရှိတွေပါတဲ့..(ကြာကူလီသူ့လိုမလုပ်လို့နေမှာပေါ့)Sunday at 10:23 · Like ·2peopleဦး စစ်မင်း ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ ပြည်က ယဉ်ကျေးမှု့ ထွန်းကား တာ နည်းပါးနေသေးတယ်ဆိုပါ့လား... မြန်မာနိုင်ငံ လူတွေ ကလူရိုင်းတွေ ဖြစ်မယ် :DSunday at 10:25 · Like ·6peopleဦး စစ်မင်း ဟဟဟ အရေးထဲ သတင်းမေးတဲ့ ကောင် က Skype Chat က တက်လာ သေးတယ် ကွိကွိ တဲ့ ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟSunday at 10:26 · Like ·7peopleThway Thitsar ဟဟဟဟဟ.. ဦးစစ်ကို လာမျိုးလာစမ်းလို့မရဘူး ဟဟဟဟ.. တမ်းသိတာပဲ.. :PSunday at 10:27 · Like ·6peopleကြယ် စင် လင်း သူစားထားတဲ့..ထမင်းတွေ ဘယ်တိုင်းပြည်က ပိုက်ဆံနဲ့စားထားလဲ ဆိုတာ သိအောင် လက်ထိုးပြီး အန်ခိုင်းလိုက်ပါ...Sunday at 10:27 · Like ·7peopleဦး စစ်မင်း အသံကြားတာနဲ့ မှတ်မိတယ် ဘယ် Chat လဲဆိုတာ :PSunday at 10:28 · Like ·2peopleရဲ သူရ အေးကွာထမင်းစားသစ္စာစူးမယ့်ကောင်...ထမင်းကျွေးတဲ့လက်ပြန်ကိုက်တဲ့ခွေးSunday at 10:28 · Like ·3peopleကြယ် စင် လင်း မျိူးစေ့မမှန်လို့ ပင်မသန် တာပဲ မှတ်လိုက်ပါ့မယ်Sunday at 10:36 · Like ·4peopleThway Thitsar RFA နဲ့ VOA ကလူတွေကို အတင်းတုပ် ကြာကူလီရိုက်ပြီးလို့ ပေါ်သွားတာနဲ့ စားကျက်ပြောင်းတွားပီ.. ခေတ်လှိုင်းလွင်ပြင်တဲ့.. မယုံလို့လား ဝေးလို့လားမသိဘူး လူကိုတောင် ကိုယ်တွေ့မမေးတော့ဘူး ချက်ထဲကနေပဲ မေးတော့တာ.. ဖြစ်ရမယ်.. သစ္စာမရှိတဲ့သူတွေရဲ့ ဘွတွေ ဘွတွေ... :PSunday at 10:38 · Like · 1 personရဲ သူရ Ko Iron ကတော့နာမည်ကြီးတယ်...သန်းဝင်းထွဋ်ကခေတ်လှိုင်းလွင်ပြင်မှာ...Ko Iron နာမည်ကို စာလုံးတောင်ပေါင်းပြတာ..ကေအို ကို အိုင်အာအိုအန် အိုင်းယွန်း..Ko Iron ဆိုပြီးတစ်ခြားဗွီဒီယိုတစ်ခုတည်းမှာနားထောင်လိုက်ရတယ်..:PSunday at 10:43 · Like ·2peopleThway Thitsar ကြည့်ထားကြ... ကလေးတစ်ယောက် အမေကို ကလေးနဲ့ ယောက်ျားကို ပစ်သွားလောက်အောင် ကြွေသွားတဲ့ ရုပ်... :PSunday at 10:48 · Like ·2peopleChan Nyein ကြာကူလီ ကောင်က ကယောင်ကတမ်းနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းပြောနေသေးတယ်...ကြာခိုတာ ယဉ်ကျေးမှုလား သတောင်းစားရ...Sunday at 11:08 · Like ·2peopleThar Gyi ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ ကြာကူလီလုပ်တာတော့ သတင်းကြေငြာတဲ့ ငတိကော ဆံရှည်ကိုယ်တော် ကော ၀န်ခံသွားတယ်။ ဖူး...... သူများ သားမယား ကြာခိုတာ မသေခင်ကတည်းက ငရဲမှာ မှတ်ပုံတင်ပြီးသားဖြစ်တာပေါ့။ ဒုသနသော.................................!Sunday at 11:28 · Like · 8 peopleThway Thitsar ‎(ethic= လူ့ကျင့်ဝတ်။ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာ။ ကျင့်ဝတ်တရား။ ကိုယ်ကျင့်တရား။ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ ပညာ။ ) တဲ့ သူများမိန်းမ ကြာကူလီခိုတာ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားကို အတင်းပြောတာ... လူ့ကျင့်ဝတ်ကို ဖောက်ဖျက်တာပဲပေါ့.. အဲဒါတွေကို ပြစ်တင် ရှုတ်ချသင့်တယ်.. :)Sunday at 11:53 · Like · 1 personMoon Lit ဟဟSunday at 12:03 · Likeကြယ် စင် လင်း သွေးသစ္စာရေ..နီကိုတော့အားနာပါတယ်... ဒီလူ့ ပုံကြီး ငါ့ဝေါပေါ်မှာ မြင်ရတာ စိတ်မချမ်းသာလို့ တက် ထားတကို ဖြုတ်လိုက်ပြီနော်..Sunday at 12:34 · Like ·3peopleMoscow Gol Li အဲလိုကောင်မျိုးတွေ စစ်တပ်ထဲကအခုချိန်လောက်တည်းကထွက်သွားတာ ကောင်းပါတယ် ..မြန်မာနိုင်ငံကထွက်သွားတာလဲကောင်းတယ် မြေလေးတယ် ....အဲကောင်ကိုအခုချိန်ကျောကုန်းကိုထုလိုက်ရင်တောင်ပဲဟင်းတွေအတောင့်လိုက်ထွက်လာအုံးမှာ...အဲဒါကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေလုပ်နေသေးတယ်..ရုပ် တောက်တဲ့လိုလိုဖားလိုလိုနဲ့ ..အဟက်Sunday at 12:43 · Like ·2peopleThway Thitsar ဟုတ်ကဲ့ ကိုကြယ်.. :)Sunday at 12:45 · Like · 1 personဆန်း သစ် ရှင်းလေရှုပ်လေဖြစ်တော့မယ်။Sunday at 13:10 · Like ·3peoplePaing Soe Oo ဘယ်လိုတွေ တိုက်ခိုက်တာလည်း facebook ပေါ်ကနေ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ...အဲဒါလေးပါ DVBကနေ အသံလွှင့်ပေးရင်ကောင်းမှာနော်..ဘယ်သူနဲ့ ဘယ်သူက ဘယ်လို တွေ chatခဲ့တာတွေကို ဘယ်သူတွေက ဖော် ထုတ်သွားတာကို ကျွန်တော် တို့ က မကျေမနပ် ဖြစ်ရတာပါလို့...အဟတ်ဟတ်( ငါ့ အိမ်က နွားမ ကြီး ရွာထဲ လျောက်လည်ပြီး ရွာရိုးကိုးပေါက် တွေကရာနွားတွေနဲ့ အလေလိုက်နေတာလည်း ဦးသန်းရွှေကြီးမိန့်ခွန်းကြောင့်တဲ့.)Sunday at 14:27 · Like ·3peopleGipsy Moe Tein မေးတဲ့သူနဲ့ ဖြေတဲ့သူကတော့ ဟုတ်နေတာပဲ အခုဗျူးထားတာက ကြာကူလီအကြောင်းဗျူးချင်တာလား စစ်တပ်မကောင်းဗျူးချင်တာလား တခုမှ မပါဘူး သြူံကာခိုတဲ့အြေ့ကာင်း စစ်တပ်မကောင်းကြီးပဲ စွတ်ပြောသွားတယ် ဟုတ်တော့ဟုတ်နေတာပဲ ဟာသလဲ မြောက်ပါတယ် ..Sunday at 16:26 · Like ·2peopleစိတ် ထား သန့်စင် ရှင်းလေ ကိုယ့်အရှက်ကိုယ် ခွဲလေဖြစ်နေပြီ...:)Sunday at 17:14 · Like ·3peopleKyaw Thu Aung ၂၀၁၁ရဲ့ အကြီးမားဆုံးဟာသပါလား :OSunday at 17:21 · Like ·5peopleParpargyi Wai အင်းး ခက်တော့ခက်တယ် ဘက်မလိုက်တမ်း အမှန်တိုင်း ရိုးရိုးလေးတွေးမယ်ဆိုရင်....ဂျီမေလ်အကောင့် ဘာကြောင့် ခိုးတာလဲ... ခိုးရတဲ့ အကြောင်းရင်း ရှိပါလိမ့်မယ်... နိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတဲ့ စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့တွေမှာလည်း တိုင်းပြည်နဲ့ ပတ်...See moreYesterday at 00:02 · Like · 8 peoplePaing Soe Oo ‎Parpargyi Wai ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်းမဟုတ်ပါဘူး...မှူး/ဗက ကာလမှာ သူက ထွက်ပြေးသွားတာပါ..တပ်မတော် မှာ စောင့်ကြည့်ကာလ တစ်ခု မှာ ရာထူးတိုးရပ်ဆိုင်းခံရလျှင် အောက် အဆင့်ပြန်ဆင်းရပါတယ်..အခု ဗိုလ်မှူးစိုင်းသိန်းဝင်းဆိုပြီးသုံးစွဲနေတဲ့ အပေါ်မှာတော့ မှားယွင်းတဲ့ သုံးစွဲမူ့တစ်ခုပါ..Yesterday at 00:08 · Like ·5peopleMyanmar Tiger မိခင်နောက်မီးလင်းပြီးမွေးဖွားလာသောYemyat Kyawswarkhaung.Nay ZawBoon Myo Myo /Aung Phyoe Kyaw.ကြာကူလီခွေးသူတောင်းစား..များ..လူအသိုင်းဝိုင်းတွင်ခွေးသူတောင်းစားများအားလက်မခံသောကြောင့်ယခုမှစပြီးခွေးသူတောင်းစားသိုင်းဝိုင်းတွင်သွားရောက်စေရန်။Yemy...See moreYesterday at 07:44 · LikeNetsoess Net အော်ကြာကူလီ ဖားခေါင်းကို နာမည် ကြီးအောင် အားကျအောင် တင်ပေးထားတာလားဟင် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောပြီး ကိုယ့်ဂျီးမောလ်အကောက်လေးတောင် မထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့စောက်၇ှုး စောက်ကြွား ငပေါ ဖာခေါင်း ကြာကူလီ ........ဟာသတွေအ၇မ်းမပြောနဲ့မင်းကို ပဲ မြှားခေါ်ရအုံးမယ် တစ်ခုပဲ ရှိတယ် မင်းကို မသေမချင်း သတ်ဖို့ ပြန်ခေါ်ဖို့ပဲ ၇ှီမယ်။။။။16 hours ago · LikeDLink ULuvtoht မျောက်သေကိုဘာမီတွန်တိုက်ပီးပါးသုံးချက်လောက်အ၇ိုက်ခံထား၇တဲ့ ၇ုပ်...စောက်သုံးကျတဲ့ ကောင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး.. တွတ်ပီစာအုပ်ထဲကအာနိုးလှမိုး၇ုပ်နဲ့ကြာကူလီကောင်6 hours ago · Like · 1 personDLink ULuvtoht Download: www.ieType.com/f.php?FzjBEY6hours ago · Like ဖျက်ဆီးတာတွေ၊ ခိုးယူတာတွေနဲ့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာတွေကို အားပေးခဲ့တာလဲ ဒီလူတွေပါပဲတစ်ခါတုန်းကလည်း http://aadcp.aseanfoodsafetynetwork.net/WP.html ဆိုတဲ့ လင့်ကိုပြပြီး အာဆီယံ ရဲ့ ဆိုဒ်ကို hack ထားပါတယ် ဆိုပြီး သတင်းလွှင့်ပြန်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ရှေ့က aadcp. နဲ့ နောက်က WP.html ကို ဖြုတ်ကြည့်လိုက်တော့ မူရင်း အာဆီယံ ဆိုဒ် http://aseanfoodsafetynetwork.net/ က အကောင်းကြီးအတိုင်းပဲ ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။ တော်တော်လေးကို ရယ်ရတဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်သလို တော်တော်လေးကို မိုက်ရိုင်းတဲ့အဖြစ်ပျက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ http://aadcp.aseanfoodsafetynetwork.net/WP.html မှာ ရိုင်းဆိုင်းစွာနဲ့ ဆဲထားတာတွေကို ရေးသားထားလို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအကြောင်းကို တကယ်ထင်ပြီး ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ဖော်ပြထားတဲ့ ဘာမှနားမလည်တဲ့ မြန်မာအတိုက်အခံတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ( http://myanmarexpress.blogspot.com/2011/05/bhg.html မှ တစ်ပိုဒ်ကို ပြန်ဖော်ပြသည် )အင်ကြင်းနိုင်၏ သဘောထားနှင့် ကြောက်တတ်တဲ့ BHGွစိုင်းသိန်းဝင်းနဲ့ နောက်မီးလင်းခဲ့တဲ့ RFA က အင်ကြင်းနိုင် ရဲ့ သဘောထားကတော့ BHG လိုမျိုး HACK တဲ့ လူတွေ၊ အဖွဲ့တွေကို အင်တာနက်ရာဇဝတ်မှု ( Cyber crime ) မှုနဲ့ အရေးယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်...။ သူများ အီးမေးတွေကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု လိုက်ခိုးခဲ့ပြီး အရေးယူခံရမှာ ကြောက်တတ်တဲ့ BHG က တော့ "ရုရှားက စစ်ဗိုလ်လေးတွေ ကိုယ့် Email password ကိုယ် လုံခြုံအောင် သော့ခတ်သိမ်းထားကြ" ဆိုတဲ့ ပိုစ့်ကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ Myanmar Express
မေလ ၂၀ ရက် ၂၀၁၃ KIA နှင့် အစိုးရတို့ မေလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေး ပွဲပြုလုပ်မည် ဟုကြား သိရ၍ ဒေသခံများ ကျေနပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေကာ ငြိမ်းချမ်...
မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းကို လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းနည်းတူ လာရောက် စစ်ဆေးစေချင်တယ်လို့ တရုတ် စီပီအိုင်ကုမ္ပဏီ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။